Karma, Ukuphindukuzalwa kanye nezandiso - Mytika Speak
Ikhaya / Karma, Ukuphindukuzalwa kanye nezandiso
Zisebenza kanjani izandiso?
Izandiso eziyisikhombisa zimelela iqembu lomphefumulo elifundisa izifundo futhi lisebenze njengeziqondiso zokuphila komunye nomunye. Bangakhonjwa ngokubheka ...
Ngabe ukuxhumana nabantu kuyaqhubeka kukho konke ukuphindukuzalwa?
Kungani abantu benamathele ekuphindukuzalwa?
Ayini amahange ayisikhombisa?
Isigaba - Karma, Ukuphindukuzalwa kanye nezandiso
Ziyini izikweletu ze-karma / karmic?
Zingavinjelwa kanjani izikweletu ze-karma / karmic?